विश्वमा सर्वाधिक धुमपान गरिने पाँच देशहरू कुन-कुन हुन त ? | Investopaper
विश्वमा सर्वाधिक धुमपान गरिने पाँच देशहरू कुन-कुन हुन त ?
धुमपान स्वास्थ्यको लागि कति हानिकारक छ भन्ने कुरा चुरोटकै बट्टामा देखाइने दृश्यले नै बताउँछ तर विश्वमा धुमपान नगर्ने देश छैन । जतिसुकै चेतनशील र शिक्षित देशमा पनि धुमपान हुने गरेको छ ।
विश्वभरी दशकौँदेखि धूमपानविरोधी नीतिहरू ल्याइएपनि अघिल्लो वर्ष गरिएको एक अध्ययनले विश्वव्यापी रूपमा चुरोट पिउने मानिसको संख्या बढ्दै गएको देखाएको थियो ।
‘पब्लिक हेल्थ फ्रान्स’का अनुसार फ्रान्समा सन् २०१६ को तुलनामा सन् २०१७ मा दश लाख मानिसहरूले धूमपान नगर्ने गरेको देखिएको छ । तल विश्वमा धूमपान बढी गर्ने देशहरूकाे चर्चा गरिएको छ ।
विश्वमै सबैभन्दा बढी धुमपान हुने देशमा टापु देश किरिबाटी गनिन्छ । यो देशको जनसंख्याको दुईतिहाई पुरुष र एकतिहाइभन्दा बढी महिलाहरु चुरोटको सेवन गर्छन । त्यसो त यो देशको जनसंख्या एक लाख तीन हजार मात्र रहेको छ । तो देशमा चुरोटमा कम कर लगाइएको कारण पनि धेरैले धुमपान सेवन गर्छन ।
पूर्वी युरोपको देश मोन्टिनिग्रोमा युरोपकै उच्च धूमपानको दर रहेको छ । यहाँका ४६ प्रतिशत मानिस धूमपान गर्छन् । उक्त बाल्कन देशको जनसंख्या ६ लाख ३३ हजार रहेको छ । त्यहाँ एक जना वयस्क व्यक्तिले प्रतिवर्ष चार हजार एक सय २४ चुरोटका खिल्ली सेवन गर्छन् ।
ग्रीस तेस्रो बढी धूमपान हुने देशको रुपमा गनिन्छ । यो देशको आधा भन्दा बढी पुरुष र ३५ प्रतिशत महिला धूमपान गर्छन् । यस देशमा चुरोटको तस्करी हुने गर्छ । एउटा बजार अनुसन्धान कम्पनी युरोमोनिटर इन्टर्न्याश्नलले सन् २०१९ देखि एथेन्सले बर्सेनि एक अर्ब युरो राजव गुमाउने अनुमान गरेको छ।
पूर्वी टिमोर विश्वमा धूमपानको उच्चदर भएको देशमध्ये एउटा हो । त्यहाँ कुल जनसंख्याको लगभग ८० प्रतिशत पुरूष धूमपान गर्छन् जून विश्वकै उच्च हो । तर यहाँ धूमपान गर्ने महिलाको संख्या भने जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै छ । यो देशमा एक बट्टा चुरोटको मूल्य एक डलर भन्दा कम पर्छ ।
रुस पाँचौ धेरै धूमपान गरिने देशमा पर्छ । यहाँ १५ वर्षमाथिका करिब ६० प्रतिशत पुरुष र २३ प्रतिशत महिला धूमपान गर्छन् । रुसी चुरोटले २२ अर्ब डलर बराबरको बजार ओगटेको बताइन्छ।
पुरुषभन्दा बढी महिला धूमपानकर्ता भएको एउटै मात्र देश डेनमार्क हो । त्यहाँ १९ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरू धूमपान गर्छन् भने धूमपान गर्ने पुरुषको प्रतिशत १८.९ छ ।
उच्च संख्यामा महिला धूमपानकर्ताहरू युरोपमा छन् । तर महिला र पुरुष धूमपानकर्ताबीचको संख्यामा सानो अन्तर छ। धूमपानका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभावका कारणले बर्सेनि ७० लाखभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार धूमपान गर्ने १ अर्ब १० करोड जनसंख्यामध्ये ८० प्रतिशत मानिसहरू कम तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा बसोबास गर्छन्। ब्रिटिश अमेरिकन टोबाको नामक एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका अनुसार विश्व सुर्तीबजारको मूल्य ७ खर्ब ७० अर्ब डलर रहेको छ।
← ३ खेल अगाबै बार्सिलोना २६औँ पटक लालिगा च्याम्पियन
नेपाल आयल निगमले सातै प्रदेशमा ग्यास बोटलिङ्ग प्लान्ट खोल्ने →